I-CEO ye-Electroneum yaBelana ngokuBonakala ngokuJongwa kwe-Cryptocurrency kwiBAC2021
29 Matshi 2021 | Ukuhlaziywa: 29 Matshi 2021
I-CEO ye-Electroneum (i-ETN) kunye ne-AnyTask.com, uRichard Ells, inike intetho eyothusayo ngamandla otshintsho kwii-cryptocurrensets kwi-BAC2021 esandula ukugqitywa "Ukuxhobisa isizukulwana nge-Crypto," yiyo loo nto i-Electroneum kunye ne AnyTask.com zijolise kuyo.
U-Ells uqaphele ukuba zimbalwa kakhulu iziqalo ze-blockchain eziye zafezekisa ifuthe elifanayo kwimveliso ye-crypto njengeeprojekthi zakhe (i-Electroneum kunye ne-AnyTask.com). Uye waphawula ukuba ezi projekthi zincedise kakhulu abantu abasebenza ngokukhululekileyo kwihlabathi liphela ukufumana i-cryptocurrency ngaphandle komthungo kwaye bavule uqoqosho lwedijithali lwehlabathi kubemi behlabathi abangabhaliswanga, ekuthiwa bakwi-1.7 yezigidigidi ukusukela ngo-Epreli 2018 yiBhanki yeHlabathi.
Ngaphaya koko, u-Ells uqaphele ukuba ii-asethi ze-crypto, ezinje nge-Electroneum, ziye zaxhobisa esi sizukulwana ngeentengiselwano zontanga (P2P) zehlabathi ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Uye wakhankanya indlela i-cryptocurrency kunye ne-intanethi ezifanayo kakhulu, ethathela ingqalelo ukuba benze ilizwe liphucukile ngonxibelelwano lwehlabathi kwangoko.
Okwangoku, i-Electroneum kuthiwa iphuhlisa inkqubo ye-cryptocurrency ecosystem. Sele iprojekthi ibonelela ngaphezulu kwe-4.2 yezigidi zabasebenzisi kumazwe ali-163. Abasebenzisi banokuhlawula idatha, i-airtime, kunye neebhili zombane ngeenyawo kumazwe alithoba e-Afrika, kubandakanya iNigeria.
Abasebenzisi be-Electroneum banokufikelela kubarhwebi abangama-2,147 kwihlabathi jikelele kwiqonga, kwaye abathengisi abatsha bayongezwa kulawulo lwe-Electroneum ngeveki njengoko imfuno inyuka.
Imisebenzi emininzi iyadityaniswa kwi-app ye-Electroneum kwaye iya kwenziwa ifumaneke kuluntu kwiinyanga ezizayo, ngokuka-Ells.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ETN-Matshi 29
I-ETN okwangoku iphakathi kolungiso oluncinci ukusuka kwi-0.0409 yeedola ukuya kuthi ga ngoku. Oko kwathethi, i-cryptocurrency ibonakala igqibezele umjikelo wolungiso kwaye ibuyile kuhambo lwayo lokunyuka oluphezulu. I-Electroneum yafumana inkxaso eyoneleyo kulungelelwaniso olukhoyo, apho yayiququzelela ukubuyela kwakhona okunempilo. Isiliphu esingezantsi kwalo mkhwa sinokunciphisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo kodwa hayi ixesha elide, njengoko indlela-encinci-yokumelana inyukele phezulu.
I-ETNUSD-Itshathi yeeyure ezi-4
I-ETN ibikoluhambo olusecaleni ukusukela ngo-Novemba ngo-2018, kulandela ukuwa kwayo kwe-98% ukuya kwi-0.0044 ephantsi. Oko kwathethi, ukubuyela kwimeko yesiqhelo-okwaqala ngasekupheleni kukaFebruwari- kuya kuhlala kuqhubeka kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 0.0367, i- $ 0409, kunye ne- $ 0500, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0300, $ 0.0230, kunye ne- $ 0.0200.
tags Cryptocurrency, UMBANE, ETN, iindaba